ကြှနျတျောတို့လညျး ရကျအတနျကွာ မှာ မကူးခတျ မလှုပျရှားကွတဲ့ ရတေိုငျကီ ထဲက ငါးတှလေို ဖွဈလာပါတယျ…. – Shwe Likes
ကြှနျတျောတို့လညျး ရကျအတနျကွာ မှာ မကူးခတျ မလှုပျရှားကွတဲ့ ရတေိုငျကီ ထဲက ငါးတှလေို ဖွဈလာပါတယျ….
G Shwe | May 18, 2021 | Knowledge | No Comments
ဂပြနျ လူမြိုးတှဟော ငါးကို အလှနျကွိုကျကွတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဂပြနျနိုငျငံနားက ပငျလယျမှာ ငါးမရှိဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဂပြနျတံငါသညျဟာ နိုငျငံနဲ့ အတျောဝေးဝေးက ပငျလယျပွငျမှာ ငါးတှကေို ပိုကျကှနျနဲ့ သှားဖမျးကွတယျ။ ဖမျးမိတဲ့ ငါးတှကေို လှတှေရေဲ့ ဝမျးဗိုကျတှမှော ထညျ့ထားကွတယျ။ ငါးဖမျးလှတှေေ ရကျအတနျကွာမှာ ဂပြနျနိုငျငံကို ပွနျရောကျတော့ ဖမျးလာတဲ့ ငါးတှအေားလုံး သကေုနျကွပွီ။ ဂပြနျလူမြိုးတှဟော သနေတေဲ့ ငါးတှကေို မစားကွဘူး။
ဒီပွဿနာကို ဖွရှေငျးဖို့ ဂပြနျငါးဖမျးသမားတှဟော ရခေဲတှထေညျ့ထားတဲ့ သတ်ေတာတှကေို လှတှေပေျေါမှာ တငျပွီး ပငျလယျပွငျမှာ ငါးသှားဖမျးကွပွနျတယျ။ ဖမျးလို့ ရတဲ့ ငါးတှကေို သတ်ေတာတှထေဲမှာ ရခေဲစိမျထားလိုကျကွတယျ။ ဂပြနျလူမြိုးတှဟော လတျလတျဆတျတတျ မဟုတျတဲ့ ရခေဲစိမျငါးတှရေဲ့ အရသာကို မကွိုကျကွဘူး။ ရခေဲစိမျငါးတှဟော လတျလတျဆတျဆတျ ငါးတှလေောကျ ဈေးမရကွဘူး။
ဒီတဈခါမှာ ဂပြနျငါးဖမျးကုမ်ပဏီတှဟော သူတို့ စကျလှကွေီးတှပေျေါမှာ ငါးတှေ ထညျ့ဖို့ ရတေိုငျကီကွီးတှေ တငျပွီး ပငျလယျပွငျကို ငါးဖမျးထှကျကွပွနျတယျ။ ဖမျးမိတဲ့ ငါးအရှငျတှကေို ရဖွေညျ့ထားတဲ့ တိုငျကီတှထေဲမှာ ထညျ့ထားလိုကျကွတယျ။ ငါးတှဟော ရတေိုငျကီတှထေဲမှာ ရကေူးခတျနကွေပမေယျ့ ရကျအနညျးငယျကွာတော့ မောပနျးပွီး ရမေကူးကွတော့ဘဲ တိုငျကီထဲမှာ ငွိမျနကွေတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံရောကျတော့ ငါးတှေ မသကွေပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဂပြနျလူမြိုးတှဟော ရကျအတနျကွာ မလှုပျမရှကျ ငွိမျနကွေတဲ့ ငါးတှရေဲ့ အရသာကို သိကွတယျ။ အဲဒီငါးတှကေို လူတှေ မကွိုကျကွလို့ ဈေးကောငျးကောငျးမရဘူး။
ရခေဲစိမျငါး၊ ရထေဲမှာ မလှုပျမယှကျ ငွိမျနတေဲ့ ငါးတှကေို မကွိုကျကွတဲ့ ဂပြနျလူမြိုးတှအေတှကျ ဂပြနျငါးဖမျးကုမ်ပဏီတှဟော ဘယျလိုလုပျရမလဲ တှေးတောကွံဆကွရငျး နောကျဆုံးမှာ အဖွကေို ရှာတှလေို့ကျကွတယျ။
ငါးဖမျးကုမ်ပဏီတှဟော သူတို့ စကျလှတှေပေျေါမှာ အရငျလိုပဲ ရတေိုငျကီကွီးတှေ တငျဆောငျပွီး ပငျလယျပွငျကို ငါးဖမျးထှကျကွပွနျတယျ။ ဖမျးမိတဲ့ ငါးတှကေို အရငျလိုပဲ ရတေိုငျကီကွီးတှထေဲမှာ ထညျ့ထားလိုကျကွတယျ။ ဒီတဈခါတော့ ရတေိုငျကီထဲက ငါးတှဟော ရကျအတျောကွာအထိ မရပျနား ကူးခတျနကွေပါတော့တယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲ။ ရတေိုငျကီတိုငျးမှာ ငါးမနျးအသေးစားလေး တဈကောငျစီ ထညျ့ထားပေးတယျ။ ငါးမနျးဟာ တိုငျကီထဲ ရောကျလာတဲ့ ငါးလေးတှေ အနညျးငယျစားသောကျပွီး ဗိုကျဝလို့ တိုငျကီထဲမှာ လှညျ့ပတျကူးခတျနတေယျ။ တိုငျကီထဲက ငါးတှဟော ငါးမနျးကို ကွောကျလို့ တိုငျကီတှထေဲမှာ မရပျမနား ကူးခတျနကွေတယျ။ စကျလှတှေေ ဂပြနျနိုငျငံကို ပွနျရောကျတော့ လတျဆတျပွီး လှုပျရှားကူးခတျနကွေတဲ့ ငါးတှရေဲ့ အရသာကို ဂပြနျတှေ အလှနျကွိုကျလို့ ဈေးကောငျးရကွတယျ။
ကြှနျတျောတို့လညျး ရကျအတနျကွာမှာ မကူးခတျ မလှုပျရှားကွတဲ့ ရတေိုငျကီထဲက ငါးတှလေို ဖွဈလာတတျကွပါတယျ။ ဘဝမှာ ကွိုးစားမှုမလုပျကွတော့ဘဲ ရှိတာလေးနဲ့ တငျးတိမျကနြေပျပွီး နနေကွေတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ဘဝမှာ တိုးတကျအောငျမွငျမှု မရကွတော့ဘူး။ အသကျကွီးလာတော့ နစေရာ စားစရာမရှိတဲ့ ဘဝရောကျမှ ငါ ငယျငယျက မကွိုးစားခဲ့လို့ပဲဆိုပွီး နောငျတရတတျကွတယျ။
အဲဒီလို မဖွဈဖို့ ကြှနျတျောတို့ စိတျထဲမှာ ငါးမနျးတဈကောငျ ထညျ့ထားပေးသငျ့ပါတယျ။ အဲဒီငါးမနျးဆိုတာ ဥပမာပါ။ သငျ့ကို ပငျြးရိငွီးငှပွေီ့း သကျသာသလို နတေတျတဲ့ စိတျကို ကွိုးစားရုနျးကနျစမေယျ့ လှုံဆျောမှု ပေးခွငျးကို ပွောတာပါ။ စိတျကို ဘယျလို လှုံ့ဆျောပေးရမလဲ။
သငျ့ကိုယျသငျ ဒီမေးခှနျးတှေ မေးပါ။
– ငါ ဘာအတှကျ လူဖွဈလာတာလဲ။ လောကကွီးကို ကောငျးကြိုးပွုဖို့လား။ ဆိုးကြိုးပေးဖို့လား။
– ငါ လောကကွီးနဲ့ လူသားတှအေတှကျ ဘာလုပျပေးရမလဲ။ ငါ့နိုငျငံ ငါ့လူမြိုးတှအေတှကျ ငါ ဘာတှေ လုပျပေးနိုငျသလဲ။
– ငါသသှေားရငျ ငါ့ပတျဝနျးကငျြက ငါ့အကွောငျး ဘာပွောကွမလဲ။ အကောငျးပွောကွမလား။ အဆိုးပွောကွမလား။ ဒါမှမဟုတျ မှေးဖှားလာစဉျကနေ သဆေုံးသှားခြိနျအထိ ဘယျသူမှ သတိမထားမိတဲ့ လူတဈယောကျလား။
ဂျပန် လူမျိုးတွေဟာ ငါးကို အလွန်ကြိုက်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံနားက ပင်လယ်မှာ ငါးမရှိဘူး။ ဒါကြောင့် ဂျပန်တံငါသည်ဟာ နိုင်ငံနဲ့ အတော်ဝေးဝေးက ပင်လယ်ပြင်မှာ ငါးတွေကို ပိုက်ကွန်နဲ့ သွားဖမ်းကြတယ်။ ဖမ်းမိတဲ့ ငါးတွေကို လှေတွေရဲ့ ဝမ်းဗိုက်တွေမှာ ထည့်ထားကြတယ်။ ငါးဖမ်းလှေတွေ ရက်အတန်ကြာမှာ ဂျပန်နိုင်ငံကို ပြန်ရောက်တော့ ဖမ်းလာတဲ့ ငါးတွေအားလုံး သေကုန်ကြပြီ။ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ သေနေတဲ့ ငါးတွေကို မစားကြဘူး။
ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ ဂျပန်ငါးဖမ်းသမားတွေဟာ ရေခဲတွေထည့်ထားတဲ့ သေတ္တာတွေကို လှေတွေပေါ်မှာ တင်ပြီး ပင်လယ်ပြင်မှာ ငါးသွားဖမ်းကြပြန်တယ်။ ဖမ်းလို့ ရတဲ့ ငါးတွေကို သေတ္တာတွေထဲမှာ ရေခဲစိမ်ထားလိုက်ကြတယ်။ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ လတ်လတ်ဆတ်တတ် မဟုတ်တဲ့ ရေခဲစိမ်ငါးတွေရဲ့ အရသာကို မကြိုက်ကြဘူး။ ရေခဲစိမ်ငါးတွေဟာ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ငါးတွေလောက် ဈေးမရကြဘူး။
ဒီတစ်ခါမှာ ဂျပန်ငါးဖမ်းကုမ္ပဏီတွေဟာ သူတို့ စက်လှေကြီးတွေပေါ်မှာ ငါးတွေ ထည့်ဖို့ ရေတိုင်ကီကြီးတွေ တင်ပြီး ပင်လယ်ပြင်ကို ငါးဖမ်းထွက်ကြပြန်တယ်။ ဖမ်းမိတဲ့ ငါးအရှင်တွေကို ရေဖြည့်ထားတဲ့ တိုင်ကီတွေထဲမှာ ထည့်ထားလိုက်ကြတယ်။ ငါးတွေဟာ ရေတိုင်ကီတွေထဲမှာ ရေကူးခတ်နေကြပေမယ့် ရက်အနည်းငယ်ကြာတော့ မောပန်းပြီး ရေမကူးကြတော့ဘဲ တိုင်ကီထဲမှာ ငြိမ်နေကြတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရောက်တော့ ငါးတွေ မသေကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ ရက်အတန်ကြာ မလှုပ်မရှက် ငြိမ်နေကြတဲ့ ငါးတွေရဲ့ အရသာကို သိကြတယ်။ အဲဒီငါးတွေကို လူတွေ မကြိုက်ကြလို့ ဈေးကောင်းကောင်းမရဘူး။
ရေခဲစိမ်ငါး၊ ရေထဲမှာ မလှုပ်မယှက် ငြိမ်နေတဲ့ ငါးတွေကို မကြိုက်ကြတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက် ဂျပန်ငါးဖမ်းကုမ္ပဏီတွေဟာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ တွေးတောကြံဆကြရင်း နောက်ဆုံးမှာ အဖြေကို ရှာတွေ့လိုက်ကြတယ်။
ငါးဖမ်းကုမ္ပဏီတွေဟာ သူတို့ စက်လှေတွေပေါ်မှာ အရင်လိုပဲ ရေတိုင်ကီကြီးတွေ တင်ဆောင်ပြီး ပင်လယ်ပြင်ကို ငါးဖမ်းထွက်ကြပြန်တယ်။ ဖမ်းမိတဲ့ ငါးတွေကို အရင်လိုပဲ ရေတိုင်ကီကြီးတွေထဲမှာ ထည့်ထားလိုက်ကြတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ရေတိုင်ကီထဲက ငါးတွေဟာ ရက်အတော်ကြာအထိ မရပ်နား ကူးခတ်နေကြပါတော့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ရေတိုင်ကီတိုင်းမှာ ငါးမန်းအသေးစားလေး တစ်ကောင်စီ ထည့်ထားပေးတယ်။ ငါးမန်းဟာ တိုင်ကီထဲ ရောက်လာတဲ့ ငါးလေးတွေ အနည်းငယ်စားသောက်ပြီး ဗိုက်ဝလို့ တိုင်ကီထဲမှာ လှည့်ပတ်ကူးခတ်နေတယ်။ တိုင်ကီထဲက ငါးတွေဟာ ငါးမန်းကို ကြောက်လို့ တိုင်ကီတွေထဲမှာ မရပ်မနား ကူးခတ်နေကြတယ်။ စက်လှေတွေ ဂျပန်နိုင်ငံကို ပြန်ရောက်တော့ လတ်ဆတ်ပြီး လှုပ်ရှားကူးခတ်နေကြတဲ့ ငါးတွေရဲ့ အရသာကို ဂျပန်တွေ အလွန်ကြိုက်လို့ ဈေးကောင်းရကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့လည်း ရက်အတန်ကြာမှာ မကူးခတ် မလှုပ်ရှားကြတဲ့ ရေတိုင်ကီထဲက ငါးတွေလို ဖြစ်လာတတ်ကြပါတယ်။ ဘဝမှာ ကြိုးစားမှုမလုပ်ကြတော့ဘဲ ရှိတာလေးနဲ့ တင်းတိမ်ကျေနပ်ပြီး နေနေကြတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဘဝမှာ တိုးတက်အောင်မြင်မှု မရကြတော့ဘူး။ အသက်ကြီးလာတော့ နေစရာ စားစရာမရှိတဲ့ ဘဝရောက်မှ ငါ ငယ်ငယ်က မကြိုးစားခဲ့လို့ပဲဆိုပြီး နောင်တရတတ်ကြတယ်။
အဲဒီလို မဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ထဲမှာ ငါးမန်းတစ်ကောင် ထည့်ထားပေးသင့်ပါတယ်။ အဲဒီငါးမန်းဆိုတာ ဥပမာပါ။ သင့်ကို ပျင်းရိငြီးငွေ့ပြီး သက်သာသလို နေတတ်တဲ့ စိတ်ကို ကြိုးစားရုန်းကန်စေမယ့် လှုံဆော်မှု ပေးခြင်းကို ပြောတာပါ။ စိတ်ကို ဘယ်လို လှုံ့ဆော်ပေးရမလဲ။
သင့်ကိုယ်သင် ဒီမေးခွန်းတွေ မေးပါ။
– ငါ ဘာအတွက် လူဖြစ်လာတာလဲ။ လောကကြီးကို ကောင်းကျိုးပြုဖို့လား။ ဆိုးကျိုးပေးဖို့လား။
– ငါ လောကကြီးနဲ့ လူသားတွေအတွက် ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။ ငါ့နိုင်ငံ ငါ့လူမျိုးတွေအတွက် ငါ ဘာတွေ လုပ်ပေးနိုင်သလဲ။
– ငါသေသွားရင် ငါ့ပတ်ဝန်းကျင်က ငါ့အကြောင်း ဘာပြောကြမလဲ။ အကောင်းပြောကြမလား။ အဆိုးပြောကြမလား။ ဒါမှမဟုတ် မွေးဖွားလာစဉ်ကနေ သေဆုံးသွားချိန်အထိ ဘယ်သူမှ သတိမထားမိတဲ့ လူတစ်ယောက်လား။
ဒီကနေ့ အပွောမြားနတေဲ့ အငျတာနကျ အသုံးပွုရာမှာ Blacklist / Whitelist ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယျလဲ?
ကိုဗဈကွောငျ့ အနံ့မရ၊ အောကျဆီဂငျြကြ တဲ့ အခါနှငျ့ ဘာဆေးသောကျရမလဲ ဘာတှလေုပျကွမလဲ